Mpanamboatra foibe famokarana vokatra PCB | China PCB orinasa mpamokatra vokatra mpamokatra
Ity dia takelaka boribory henjana miova 6 ho an'ny elektronika mandeha ho azy. Ny PCB flex mihenjana dia be mpampiasa amin'ny teknolojia ara-pitsaboana, sensor, mekatronika na fitaovana, elektronika manaparitaka faharanitan-tsaina bebe kokoa hatrany amin'ny toerana kely kokoa, ary ny hakitroky ny entana dia mihamitombo hatrany hatrany.
4 sosona henjana miolakolaka amin'ny fihenan'ny PI
Ity dia takelaka boribory henjana miova 4 ho an'ny elektronika mandeha ho azy. Ny PCB flex mihenjana dia be mpampiasa amin'ny teknolojia ara-pitsaboana, sensor, mekatronika na fitaovana, elektronika manaparitaka faharanitan-tsaina bebe kokoa hatrany amin'ny toerana kely kokoa, ary ny hakitroky ny entana dia mihamitombo hatrany hatrany.
6 layer PCB flex mihenjana
Ity dia takelaka boribory henjana miova 6 ho an'ny fitaovana Optics. Ny PCB flex mihenjana dia be mpampiasa amin'ny teknolojia ara-pitsaboana, sensor, mekatronika na fitaovana, elektronika manaparitaka faharanitan-tsaina bebe kokoa hatrany amin'ny toerana kely kokoa, ary ny hakitroky ny entana dia mihamitombo hatrany hatrany.
12 sosona henjana PCB Rogers & Dupont Material
Ity dia takelaka boribory henjana miolakolaka 12 ho an'ny vokatra Aerospace. Ny PCB flex mihenjana dia be mpampiasa amin'ny teknolojia ara-pitsaboana, sensor, mekatronika na fitaovana, elektronika manaparitaka faharanitan-tsaina bebe kokoa hatrany amin'ny toerana kely kokoa, ary ny hakitroky ny entana dia mihamitombo hatrany hatrany.
Ity dia 10 board RF circuit board ho an'ny indostrian'ny telecom. Matetika ny RF PCB dia mitaky laminate miaraka amina lozisialy, fantsona, mekanika na toetra mampiavaka hafa mihoatra ny an'ireo fitaovana FR-4 mahazatra mahazatra. Miaraka amin'ny traikefa anananay nandritra ny taona maro tamin'ny laminateza microwave mifototra amin'ny PTFE, dia takatray ny fitakiana avo azo itokisana sy ny fandeferana mafy amin'ny ankamaroan'ny fampiharana.
Substrate ceramic RF PCB + substrate FR4
Ity dia board board RF 6 layer ho an'ny indostrian'ny telecom. Matetika ny RF PCB dia mitaky laminate miaraka amina lozisialy, fantsona, mekanika na toetra mampiavaka hafa mihoatra ny an'ireo fitaovana FR-4 mahazatra mahazatra. Miaraka amin'ny traikefa anananay nandritra ny taona maro tamin'ny laminateza microwave mifototra amin'ny PTFE, dia takatray ny fitakiana avo azo itokisana sy ny fandeferana mafy amin'ny ankamaroan'ny fampiharana.
Ity dia takelaka fizaran-tany RF 2 sosona ho an'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra. Matetika ny RF PCB dia mitaky laminate miaraka amina lozisialy, fantsona, mekanika na toetra mampiavaka hafa mihoatra ny an'ireo fitaovana FR-4 mahazatra mahazatra. Miaraka amin'ny traikefa anananay nandritra ny taona maro tamin'ny laminateza microwave mifototra amin'ny PTFE, dia takatray ny fitakiana avo azo itokisana sy ny fandeferana mafy amin'ny ankamaroan'ny fampiharana.
Birao boribory 4 sosona amin'ny masony masira
Ity dia takelaka boribory 4 sosona ho an'ny vokatra mandeha amin'ny fiara. UL voamarina Shengyi S1000H tg 150 FR4 fitaovana, 1 OZ (35um) hatevin'ny varahina, ENIG Au Thickness 0.05um; Ni Thickness 3um. Minimum amin'ny alalàn'ny mason'ny 0.203 mm apetaka amin'ny sarontava masaka.
Kianja boribory 6 ho an'ny fahatsapana sy fifehezana indostrialy
Ity dia takelaka boribory 6 ho an'ny vokatra fanaraha-maso sy fanaraha-maso indostrialy. UL voamarina Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) fitaovana FR-4, hatevin'ny varahina 1 OZ (35um), ENIG Au Thickness 0.05um; Ni Thickness 3um. V-scoring, CNC Milling (fanodinana). Ny famokarana rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny RoHS.
Valan-tsambo boribory 8 sosona OSP vita ho an'ny PC tafiditra
Ity dia takelaka boribory 8 ho an'ny vokatra PC natsofoka. Ny tapitra OSP (Organic Surface Preservative) dia mpiorina tontolo iainana, ary maitso maitso na dia ampitahaina amin'ny famaranana PCB tsy mitarika aza, izay mazàna misy poizina misy poizina kokoa, na mitaky fanjifana angovo avo kokoa. OSP dia famaranana tsara tsy misy firamainty, miaraka amin'ny fisaka malalaka ho an'ny SMT Assembly, saingy manana fotoana fohy ihany koa io.
Ity dia takelaka boribory 10 sosona ho an'ny vokatra PDA Ultra-lasantsy. Manohana ny mpanjifa amin'ny layout PCB izahay. Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) fitaovana FR-4. Ny sakany farany ambany / elanelana 4mil / 4mil. Amin'ny alàlan'ny saron-tava solder.
12 layer avo lenta FR4 PCB ho an'ny Embedded System
Ity dia takelaka boribory 12 ho an'ny vokatra rafitra natsofoka. Ny famolavolana misy tsipika tena tery sy elanelana 0.1mm / 0.1mm (4mil / 4mil) ary miaraka amin'ny Multi BGA. UL voamarina avo tg 170 fitaovana. Impedance tokana & impedance tsy mitovy.